Kunyange ndiine chipo chokuporofita ndichinzwisisa zvakavandika zvose, ndiine ruzivo rwose; kunyange dai ndiine chitendero chakaperera chinosudurudza makomo asi ndisina rudo hapana zvandiri.
Usatsive kana kuita daka uchivenga vamwe vako. Asi ida mumwe wako sokuda kwaunozviita iwe pachako, ndini Tenzi ndinodaro.
Ruvengo runomutsa gakava, asi rudo runofukidza zvikanganiso zvose.
Munhu anowana mukadzi anowana chinhu chakanaka chinotova chiratidzo chorudo rwaTenzi.
 Mazwi aTENZI, mazwi matsvene, akaita sesirivha yakacheneswa muvirira romoto ikagocheneswa kakapetwa kanomwe. Imi TENZI tichengetedzeiwo, tidzivirireiwo nokusingaperi kuchizvarwa ichi.
2 VaKorinte 6:14
Musasungwe pajoko navanhu vasingatendi nokuti ururami hunei nouipi? Kana kuti chiedza chine ukama hwei nerima?
akati, ‘Nechikonzero ichochi murume achasiya baba naamai vake achiva akabatanidzwa nomukadzi wake.’ Vaviri ivavo vachiva nyama imwechete.
Ndiko kusaka chitendero chavo chakaita kuti vanzi vakarurama.
Munhu anobvisawo mamwe mazwi okuporofita uku Mwari achabvisa mugove wake uri mumuti woupenyu nomugove wake muguta dzvene zvinotsanangurwa mubhuku rino iri.
Unogona zvako kutswa benzi muduri pamwechete nembeswa asi upenzi hwaro haubve pariri.
Kana achinge aita kuti pamusoro pacho pati chechetere, haamwaye here mbeu dzedhiri nokudyara mbeu dzekumini, agoisamo koroni mumitsetse, nebhari panzvimbowo payowo chaipo, koroni yesipereti yakapoteredzawo kumucheto?